မြောက်ပြင်သည် (ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ) - ဝီကီပီးဒီးယား
မြောက်ပြင်သည် အမည်ရှိ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် မြောက်ပြင်သည် (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
မြောက်ပြင်သည် ("မြောက်နန်းမတော်မိဖုရား" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ) သည် ပုဂံခေတ်ကာလတွင် နန်းတက်ခဲ့သော ညောင်ဦး စောရဟန်း၊ ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူနှင့် စုက္ကတေး မင်းသုံးပါးတို့၏ မိဖုရား ဖြစ်ပြီး ပုဂံမင်းနေပြည်တော်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သော အနော်ရထာ၏ မိခင် ဖြစ်သည်။
တော်ဝင်ရာဇဝင်ကျမ်းများအဆိုအရ မြောက်ပြင်သည် သည် မင်းမျိုးမင်းနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး မွေးချင်းညီအစ်မ သုံးဦးတွင် အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ညီအစ်မသုံးဦးသည် ညောင်ဦး စောရဟန်းမင်း (ခန့်မှန်း ၁၀၀၀ ခုနှစ်)နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ အစ်မတော်နှစ်ဦးမှာ တောင်ပြင်သည် ("တောင်နန်းမတော် မိဖုရား") နှင့် အလယ်ပြင်သည် ("အလယ်နန်းမတော် မိဖုရား")တို့ ဖြစ်ကြကာ သူမသည် မြောက်ပြင်သည် ("မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား") ဖြစ်သည်။ ၁၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ညောင်ဦးစောရဟန်းကို ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူက လုပ်ကြံကာ နန်းသိမ်းခဲ့ရာ ညီအစ်မသုံးဦးသည် ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ၏ မိဖုရားများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မြောက်ပြင်သည် သည် သားတော် မင်းစော (အနော်ရထာ ဖြစ်လာမည့်သူ) အား မွေးဖွားခဲ့သည်။ မြောက်ပြင်သည်သည် နောက်ပိုင်းတွင် တောင်နန်းမတော် မိဖုရား ခေါ် မိဖုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၁၀၂၁ တွင် ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ၏ မွေးစားသားတော် နှစ်ဦးဖြစ်သော ကျဉ်စိုးနှင့် စုက္ကတေးတို့က ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူအား နန်းချကာ ရဟန်းဝတ်စေခဲ့သည်။ မြောက်ပြင်သည်နှင့် သားတော် မင်းစောကိုလည်း ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူမင်း ရဟန်းဝတ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီးသို့ ပြောင်းရွှေ့နေစေခဲ့သည်။ ၁၀၄၄ ခုနှစ်တွင် စုက္ကတေးမင်း နန်းတက်လာပြီးနောက် မြောက်ပြင်သည်အား မိဖုရားအဖြစ် အတင်းအဓ္မ တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မင်းစောသည် အမျက်ထွက်ကာ ပုန်ကန်လေသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၀၄၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်တွင် မင်းစောသည် စုက္ကတေးမင်းနှင့် မြင်းစီးချင်းတိုက်ကာ အနိုင်ရပြီး ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။[note ၁] ရာဇဝင်ကျမ်းများ အဆိုအရ မြောက်ပြင်သည်သည် သားတော်မင်းစောက စုက္ကတေးအား အောင်နိုင်ကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ပုတ္တလင် နှင့် ရင်ဝတ်ကျွတ် ဟူသော ဘုရားနှစ်ဆူကို တည်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Yazawin Thit Vol. 1 2012: 93
↑ ၂.၀ ၂.၁ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၂၂၇
↑ ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၁၂၊ စာ ၉၅
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၂၂၈
↑ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၂၂၉–၂၃၀
↑ ရာဇဝင်သစ် အတွဲ ၁၊ ၂၀၁၂၊ စာ ၉၅
တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သူ (၂၀၁၂) ။ ကျော်ဝင်း; သိန်းလှိုင် (eds.)။ ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း။ ၁–၃ (ဒုတိယအကြိမ် ed.)။ ရန်ကုန်: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။
မွေးဖွား c. ၉၉၀
တောင်ပြင်သည် ပုဂံပြည် မိဖုရားခေါင်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြောက်ပြင်သည်_(ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ)&oldid=717853" မှ ရယူရန်
၁၀ ရာစု မြန်မာ အမျိုးသမီးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။